टेबलटेनिसको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ! – Khel Dainik
टेबलटेनिसको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग !
चैत्र १३, २०७३ | (PostaComment)
१३ चैत / एसियाली टेबलटेनिस युनियनका कोषाध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय टेबलटेनिस महासंघका सदस्य धनराज चौधरीले नेपाली टेबलटेनिसको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा शनिबार अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघका पदाधिकारी र खेलाडीसंगको भेटमा चौधरीले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘विगतमा पनि हामीले नेपाली टेबलटेनिसलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौं । आगामी दिनमा पनि सक्दो सहयोग गर्ने छौं ।’ भारतीय टेबलटेनिस संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीले भने ।
चौधरीले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा सहभागी हुने टेबलटेनिस खेलाडीलाई भारतको सिलीगुढीमा निशुल्क बन्द प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइ दिने समेत अवगत गराए । उनले खेल सामाग्रीमा पनि सहयोगको वाचा गरे । चौधरी भारतीय ओलम्पिक कमिटीका सदस्य पनि हुन् ।
टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्दराज वैद्यले विगतको सहयोगका लागि धन्यवाद दिदै आउँदा दिनमा पनि सहयोगले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष वैद्यले चौधरीलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।
← दोश्रो नेपाल कप भेट्रान फुटबल: आर्मी सेमिफाइनलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलिको पहिलो अभ्यास रिजाल मेमोरियल रङसालामा →
बज्राचार्यको नाममा प्रतिस्ठान गठन गर्ने तयारी चैत्र १३, २०७३
राखेपको सहयोग चैत्र १३, २०७३
सुपर लिगमा ललितपुरद्वारा बुटवलको चुनौति समाप्त चैत्र १३, २०७३
शुरुवात नजिक पुगेर पनि स्थगित भयो फुटसल लिग चैत्र १३, २०७३
बिशालको निर्णायक गोलले धनगढी फाइनलमा चैत्र १३, २०७३
फुटबल खेलाडीहरुलाई सहयोग (फोटो फिचर) चैत्र १३, २०७३